Axmed Maxamed Laxoos (Axmed Mashruuc) oo loo doortay madaxweyne maamul loogu macagtaray Bakool Sare – STAR FM SOMALIA
Degmada Ceelbarde ee Gobolka Bakool, waxaa shalay si rasmi ah looga dhawaaqay Maamul cusub oo la magacbaxay Maamulka Bakool Sare, kaasi oo loo doortay Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen.
Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya oo deegaankaasi ka soo jeeda, ayaa ku howlanaa muddooyinkii u dambeeyay dhisida Maamulkan cusub, iyadoo Ergooyin ka kala timid saddexda Degmo ee Aato, Yeed iyo Ceelbarde la isugu geeyay Magaalada Ceelbarde.
Madaxweynaha cusub ee Maamulka Bakool Sare ayaa waxaa loo doortay Axmed Maxamed Laxoos (Axmed Mashruuc). Axmed Mashruuc wuxuu ka tirsanaa Wasiirada Maamulka Koonfur Galbeed, hayeeshe xilkaasi wuu iska casilay.
Axmed Mashruuc oo doorashadiisa ka hadlay, ayaa sheegay in Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada ka soo jeeda Deeganadaasi ay garteen inay dhistaan Maamul gaar ah, maadaama xaqoodii ay ka waayeen Maamulka Koonfur Galbeed ee Fadhigiisa uu yahay Magaalada Baydhabo.
Waxa kale uu sheegay Axmed Mashruuc in Ergada Dooratay isaga ay ansixiyeen Dastuurka uu yeelanaayo Maamulkaan cusub ee Bakool Sare.
Sida uu ku shaqeyn doono mar wax laga weydiiyay, maadaama saddex Degmo kaliya aysan noqoneyn Maamul ayuu sheegay Maamuladii Galmudugti hore iyo Ximan iyo Xeeb inay ku biloowdeen Degmooyin yar yar, kadibna ay sii baaheen, isaga oo sheegay Maamulkan inuu la mid yahay Maamuladaasi.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Bakool Sare ayaa waxaa loo doortay C/laahi Sahal (C/laahi Mirig) oo arimaha Samafalka ka shaqeyn jiray.
Xildhibaan Axmed Aabi Aadan oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, kuna sugnaa madasha lagu dhisay maamulkaan ayaa sheegay Xafiisyada Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasaarada Arimaha Gudaha inay ka war hayaan Dhismaha Maamulkaan oo ay u fasaxeen, kol hadii Maamulka Koonfur Galbeed ay ka waayeen xaqii ay ka doonayeen.